Waterproof Lighting eletrik
Waterproof Dabara Adaba na ụgbọ dị arọ
Waterproof Dabara Adaba na ikanam tube
Integrated ikanam Waterproof Dabara Adaba
Kewara Isi Ikanam Waterproof Dabara Adaba
Kewara Isi Ikanam Waterproof Dabara Adaba na mmetụta
Louver Dabara Adaba
Recessed Louver Dabara Adaba na ikanam tube
N'elu Louver Dabara Adaba na ikanam tube
Recessed ikanam Louver Dabara Adaba
Batten Dabara Adaba
Batten kwesịrị ekwesị na ikanam tube
Ikanam Batten Dabara Adaba
Dustproof Dabara Adaba
Ikanam Dustproof Dabara Adaba
Panel Dabara Adaba
Recessed Ikanam Panel na Back Light
N'elu Ikanam Panel na Back Light
T8 ikanam Alu-Plastic tube
T8 ikanam Glass tube
na-guzobere na 2004 na dị na Longshan Town, Cixi City, Zhejiang, China, na nso Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ na-ekpuchi ebe ndị 30,000 m 2 , nwere 350 ọrụ. Anyị bụ ndị ọkachamara ọkụ ngwa oru emeputa na-elekwasị anya nnyocha, mmepe na ọhụrụ nke dị iche iche ọkụ na ngwaahịa, teknụzụ na ngwọta, na-onwem na ihe integrated mmepụta ike maka imewe & mmepe, akụkụ nhazi, ngwaahịa nzukọ a na wdg
Ịdabere na mma uru nke ulo oru ụyọkọ, na magburu onwe management echiche na mode nke ọkọnọ yinye, a na-eduga na-eri uru e kere na njem.
Arapara elu àgwà na ala na-eri, Anyị na-enye ndị ahịa na-ezu usoro nke ọkụ ngwaahịa na kasị mma price arụmọrụ ruru, dị ka engineering ọkụ na ọkụ ngwaahịa maka ndi nkiti na ojiji. Anyị nwere ike izute ndị kasị elu chọrọ si ahịa, dozie nkà na ụzụ nsogbu na ike a pụrụ iche uru na-kasị mma na onye òtù ọlụlụ maka ọtụtụ ahịa.
Na-erite uru zuru okè oru nkwado, àgwà nke ya na ngwaahịa e mma site ụwa. Anyị gafere ISO9001: 2008 Quality Management System Asambodo. The ngwaahịa na ha agafeela certifications nke OA (LVD / EMC), GS, Mankeumman, CETL, SAA na wdg
Ugbu a, anyị azụmahịa agbasawo nile China na isi ahịa na ụwa, anyị na-na-exported ka mba 30 na mpaghara, dị ka Europe, USA na Southeast Asia, na-emeri ndị na-aja site na ụlọ na ndị mba ọzọ ọrụ site ezi mma na asọmpi price.
Dị ka gị pụrụ ibe, anyị ga-rube isi na nkwa, na-amụta, na mgbe buru enye ngwaahịa ezi arụmọrụ ya na ije ozi, "ka anyị ọrụ.
Okwu: Qindu Road, East-Cixi, Industrial Mpaghara, CiXi City, Zhejiang
Ike site Globalso.com